Waxaa laga heli karaa Midori 0.4.3 | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa laga heli karaa Midori 0.4.3
Iyada oo liiska Xfce Daahfurka Midori 0.4.3 waxaa lagu dhawaaqay astaamo cusub oo xiiso leh kuwaas oo kudarsanaya mudnaan dheeri ah biraawsarkan yar.
Hada Midori waxay leedahay taageero kafiican Gtk3, Baadhitaanka gaarka loo leeyahay hadda waxaa lagu calaamadeeyay midabyo madow Dial Speed-ka ayaa hadda la isticmaali karaa. Waxaa jira waxqabadyo badan oo waxqabad leh, hadda bilaabida Midori aad ayey u dhakhso badan tahay iyadoo loo aaneynayo sida tab loo abuuray iyo maareeyaha cookie-ga si dhaqso leh loo sameeyay.
Qeybta isdhexgalka waxaa sii dheer xoogaa horumar ah oo lagu daray. Cinwaanka iyo barta baaritaanka waa la beddeli karaa, qaabka shaashadda oo buuxa wuxuu qariyaa dhammaan xuduudaha iyo baararka. Fonte waxaa hadda loo maamuli karaa si ka wanaagsan. Taasi haa, taageerada la siinayo GTK 3 waxaa loo tixgeliyaa gobolka beta. Way ku dhowdahay inay diyaar ahaato, laakiin sababo yar yar awgood weli kuma iman sidii hore.
Waxaad kala soo bixi kartaa xiriiriyeyaasha soo socda:
SHA1 checksum: 8e2f5630382ff2069847cf244898a8058e3a55b0
MD5 checksum: 900037557b82818d79d2dd1c5a7d7fd2
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa laga heli karaa Midori 0.4.3
Waxaan rajeynayaa in nashqadani ay soo hagaagtay, waxaan rakibay nooc hore lix bilood ka hor waxayna lahayd cilado badan, waan jeclahay fudeydkiisa laakiin ma lahan cadeymo.
5 mawduucyo qurux badan oo leh codad cawlan oo loogu talagalay Xfwm
Waa maxay sababta aysan ciyaartooyda waaweyni u naqshadeynin Linux?